Adeeg been abuur ah - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Sax qiimahoodu Adeegga-Shiinaha jaban Qaybo ka soo saaraha
Maaddaama ay tahay warshad farsameyn heer sare ah, OuZhan waxay leedahay ilo badan oo loogu talagalay soosaarayaasha been abuurka leh iskaashi heerkiisu sareeyo. Qeyb been abuur ah ayaa badanaa loo baahan yahay in lagu been abuurto heerkul sarre si loo sameeyo meel bannaan, ka dibna ugu dambeyn loo diro warshaddeena mashiinka si ay ugu shaqeyso kama dambaysta. Sidaa darteed, soo saare awood leh oo tobanaan sano khibrad u leh wax soo saarka farsamada, kaliya ma naqaanno howlaha kala duwan ee dhameystirka, laakiin sidoo kale waxaan si fiican u fahansanahay isku xirnaanta wax soo saarka kala duwan iyo geedi socodka farsamada ee warshadeenna hoose. , soo saaraha qaybaha been abuurka ah.
Marka markaad u baahan tahay adeegyo been abuur ah, waxaad si toos ah u raadin kartaa warshad been abuur ah, laakiin xulashada ugu fiican ayaa ah inaad hesho wershad farsameysa farsamo-yaqaanno. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad u dirto sawiradaada alaabta iyaga, waxayna badanaa kaa caawin doonaan inaad hesho tayada warshadaha been abuurka ah, u isticmaal khibradooda sannado si ay kuugu diyaariyaan dhammaan howlaha iyo habraacyada adiga kugu habboon. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad sugto keenista alaabta dhammaatay, halkii aad ka raadin lahayd warshad been abuur ah ka dibna warshad wax soo saarta, taas oo kaa badbaadin doonta waqti iyo tamar badan.
Ouzhan Qiyaasta Been Abuurka Awoodaha iyo Astaamaha:
Si kasta oo ay xaaladuhu yihiin, had iyo jeer sameynta tayada ugu sarreysa oo aan duruufo jirin wax u dhimeynin tayada ayaa ka dhigan dhismaha ugu muhiimsan ee Ouzhan.
• Adeegga dib u naqshadaynta Maaddaama macaamiisheennu aysan aqoon badan u lahayn gafka, markii aan helnay sawiradooda naqshadeynta, waxaan ogaanay in nashqadda aysan suuragal ahayn in la iska iloobo, kooxdeenna injineernimada ayaa dib u qaabeyn ku sameyn doonta qeybaha tikniyoolajiyaddeenna been abuurka ah. Xaalad kale oo ku habboon ayaa ah in macaamiisha aysan isticmaali karin CAD si ay u soo saaraan alaabada, laakiin ay gacanta ku daabacaan, iyada oo aan loo dulqaadan karin, kaliya cabirrada waaweyn. Xaaladdan oo kale, waxaan sidoo kale bixin doonnaa sawirro farsamo oo xirfad leh oo leh calaamado dulqaad guud oo been abuur ah.
• Qaab horumarineed.Mid tayo sare leh oo caaryada been abuurka ah ayaa ah ujeedada soo saarida qaybo tayo sare leh oo been abuur ah. Mid ka mid ah faa'iidooyinka noo muuqda ayaa ah inaan haysanno qalab u gaar ah oo aan leenahay dukaan dhinta isla markaana dhamaan dhimashooyinka been abuurka ah la naqshadeeyay oo aan iskood u sameysanay.
• Been abuur u dhintay. Nidaamka foorarsiga ah ee shirkadda aan iskaashiga la leenahay waa mid xidhan oo dhinta, sidaas darteedna waxaa naga go'an inaan soo saarno ilma yar yar oo illooba iyo aluminium illooba. Adoo adeegsanaya makiinado been abuur ah oo ka yimid 300 tan ilaa 2500 tan, waxaan ku bixin karnaa wax iska cafin ah 0.2kg-50kg.
• Dhammaystirka saxda ah Mararka qaarkood, iscafintu ma gaari karto cabirka ugu dambeeya ama dulqaadka qaybta ugu dambeysa. Xaaladdan oo kale, waanu ilaalin doonnaa dulqaadyada qaarkood markaan foojignaynno, ka dibna waxaannu qaban doonnaa qalabaynta saxda ah. Hawlgallada noocan oo kale ah ayaa macaamiisheenna siin doona qaybo sax ah.
• Kuleylka iyo daaweynta dusha sare. Si loo hagaajiyo astaamaha sheyga, sida adkaanta, daaweynta kuleylka ayaa la sameyn doonaa ka dib markii la been abuurto. Shirkadeenu waxay bixin kartaa adeeg kasta oo daaweynta kuleylka ah marka la codsado.Waxaan sidoo kale bixin karnaa adeegyo daaweyn dusha sare oo kala duwan, sida rinjiyeynta, galvanized, iwm.
• Imtixaan aan burburin lahayn. Cafis kasta, waxaan sameyn doonaa baaritaan aan halaagsamin kahor keenista si loo hubiyo tayada wax soo saarka.
• Adeegga baakadaha khaaska ah. Waxaan bixin karnaa adeegyo wax lagu duubay oo keliya, kaliya waa inaad na siisaa macluumaadka baakadka loo baahan yahay.
Maxaad u Doortaa Adeegyada Been abuurka Ouzhan
1. Sannado waayo-aragnimo qalabaynta
Ouzhan wuxuu ku takhasusay farsamaynta CNC muddo tobanaan sano ah, waxaan ku jirnaa meel wanaagsan oo aan iskaashi kula yeelan karno warshadda been abuurka ah waxaanan aad u naqaannay nidaamyada kala duwan iyo geeddi-socodka foojignaanta.
Ouzhan wuxuu ku takhasusay leexashada, shiidida, lathing, qodista, leexinta CNC iyo howlaha shiida, sidaas darteed waxaad ka heli kartaa xulasho ballaaran oo ah adeegyo sax ah oo sax ah oo loogu talagalay qaybahaaga been abuurka ah kooxdeena lagu kalsoon yahay.
Waxaan haynaa 10 injineer oo ku sugan xarunteena R&D, dhamaantood waa dhakhaatiir ama macalimiin ka socda Jaamacada Sayniska iyo Teknolojiyadda Shiinaha. Waxaan kuu soo bandhigi karnaa naqshadeynta xirfadaha ugu badan iyo adeegsiga qalabka.
Waxaan haynaa shaqaale kormeer tayo leh iyo qalab, sida ku cad heerarka caalamiga ah ee alaabooyinkaaga si ay u tijaabiyaan, una soo saarno warbixin tijaabo ah oo faahfaahsan oo loogu talagalay qaybaha been abuurka ah ee macaamiisha.
Cabirro iyo qaabab loo qaabeeyey ayaa la heli karaa. Ku soo dhowow inaad nala wadaagto sawiradaada 2D ama 3D ee qaybahaaga been abuurka ah, aan wada shaqeyno si aan nolosha uga dhigno mid hal abuur leh.
Waa Maxay Adeeg Been abuur ah & Sida Been Abuurku u Shaqeeyo
Geeddi-socodka been abuurka ah, birta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la riixayo, la garaacayo, ama laga soo saarayo cadaadis aad u sarreeya si loo sameeyo qaybo loogu yeero cafis. Ku dhowaad bir kasta waa la been-abuuri karaa, oo ay ku jiraan kaarboon, alwaaxyo iyo bir bir ah, aluminium, titanium, naxaas, naxaas, iwm. Birta ayaa la sii kululeeyaa ka hor hawsha adeegga been abuurka ah, laakiin looma dhalaaliyo sida hannaanka loo shubay. Waxaa jira dhowr nooc oo ah geedi socodyo been abuur ah, oo ay ku jiraan been abuur ama madaxa been abuur, u dhinto (dhinto xiran) been abuur, furfurnaan u dhinta iyo giraan wareegsan oo aan xuduud lahayn. Nooca adeegga been abuurka ah ee la xushay waxay kuxirantahay birta la been abuurayo iyo qaabka, cabirka iyo walxaha alaabada ugu dambeysa.
Been abuurka, biraha la warshadeeyay si toos ah uma kululaan. Taabadalkeed, waxaa lagu sameeyaa cadaadis aad u sarreeya. Nidaamkani wuxuu ka dhigayaa cabirka badeecada mid sax ah qaabka ugu dambeeya. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu abuuro qaybo yaryar sida xirayaasha. In kasta oo xoogga loo baahan yahay in la sameeyo biraha uu aad u ballaaran yahay, maaddaama kuleylka aan loo baahnayn, wadarta tamarta looga baahan yahay in lagu been abuurto walxaha la adeegsanayo howshaan ayaa yar. Maqaallada lagu diyaariyey qaabkani guud ahaan way xoog badan yihiin maxaa yeelay kuleylintu ma wiiqi doonto awoodda iyo joogtaynta biraha.
Aragtida beenta ah ayaa ah tan ugu badan ee adeegsiga foojarka. Dhimashada been abuurka, shaashad bir ah ayaa la dhex dhigayaa inta udhaxeysa labada dhinto. Markay caaryadu soo dhowaato, qalabka shaqadu wuxuu mari doonaa cilad caag ah illaa ay dhinaceeda ballaarani taabato dhinaca derbiga caaryada. Nidaamkan, maxaa yeelay qaar bir ah oo la shubay oo ka yimaada qalabka shaqada ayaa u qulqulaya dhinaca dibedda caaryada caarada, flash ayaa la sameeyay. Marka tooshku qaboobo, wuxuu siinayaa shaqa-qabad iska caabinta cilladaha, taas oo kor u qaadeysa awoodda sheyga ugu dambeeya. Tani waxay ku abuureysaa cadaadis gudaha qaybaha badankood waxayna ka caawineysaa maaddada inay u gudubto galka aan buuxin.
Meertada furan ee been abuurka ah, dhimashadu ma gebi ahaanba daboosho qalabka shaqada. Taabadalkeed, waxaa jira meelo furan oo u oggolaanaya dhammaan dhinacyada shaqada in ay ka gudbaan tooska xiriirka caaryada kulul ee meelaha furan ee qabow. Inta lagu jiro adeegga been abuurka ee furan, qalabka shaqada ee biraha ayaa lagu kululeeyaa heerkulkiisa dib u dhiska, ka dibna hawsha makiinada ayaa bilaabmaysa. Inta howsha socoto oo dhan, workpiece-ka waa la dhaqaajinayaa si dhammaan dhinacyada shaqada loo been abuurto. Markay workpiece-ku dhaqaaqdo oo ay dib uwareegto, qaybaha aagga bannaan waxay ku qaboobi doonaan ka hooseeya barta dib-u-cusbooneysiinta birta, ka dibna dib u kululeynaya sida foojarku u socdo.
Wareejinta giraanku waxay ku lug leedahay kulaylinta biilka biraha heerkulka been abuurka ah. Horudhaca ayaa markaa lagu ridayaa dhalada gudaha. Marka cadaadis lagu saaro darbiyada calender-ka, horudhaca ayaa bilaabaya inuu qaato qaab dhululubad ah ama mid sanadle ah. Maaddaama cabirka gudaha iyo dibadduba ay ku sii ballaadhayaan adeegyadan been-abuurka ah, aagga isweydaarsigu wuu yaraanayaa.
Qalabka Been abuurka - Qalabka loo isticmaalo been abuurka
Qalabka dillaaca kuma haboona been abuur. Maaddooyinka leh baaxadda wanaagsan iyo aagga balaastigga ah ee ballaadhan ayaa ku habboon in la been abuuro, sida birta kaarboon, birta isku-dhafan, iyo qaar ka mid ah biraha aan birta ahayn sida naxaasta, aluminium, iyo aaladaha magnesium.
Ouzhan Been Abuurkiisa Oogada Dhammaystira